Progressive Voice Myanmar » KPSN strongly condemns the Military Coup and Urgently call for the New Approaches To Achieve Peace and Democracy in Burma
Home Resources Statements KPSN strongly condemns the Military Coup and Urgently call for the New...
Statement 134 Views
KPSN strongly condemns the Military Coup and Urgently call for the New Approaches To Achieve Peace and Democracy in Burma
February 4th, 2021 • Author: Karen Peace Support Network •3minute read
The Karen Peace Support Network condemns the military coup which took place on Monday 1st February. The coup must beawake-up call to the international community that its approach towards peace and democratization in Myanmar has been fundamentally flawed. International policy was constructed on the promises of peace and democracy made byamilitary which had no interest in either. The military-crafted, centralized governing structure could never beafoundation for sustainable peace and development in Burma.
The military established its own 2008 Constitution, imposed it on the country, and then began negotiations for peace. This is the opposite to the approach which should be taken, which is that all sides negotiateaConstitution which helps to resolve the political and human rights crisis in the country. There should be widespread community consultation and input into any new Constitution, rather than remote elites making top-down decisions.
The coup has proven conclusively thatapeace process under the confines of the 2008 Constitution can never succeed, and there needs to beanew process in which all stakeholders are committed to the goal ofafederal democratic union under full civilian control. Half steps towards democracy like under the 2008 Constitution were claimed asastep towards democracy but will always be vulnerable to the military retaking control at any time. Instead they delay genuine progress towards peace, and should never be attempted again.
Therefore, we call for the following:
To all people of Burma:
Publicly reject the coup and the failed 2008 Constitution and demand the drawing up ofanew federal democratic constitution.
Boycott all products made by military companies.
To the Burma Army:
Stop offensives throughout the country, pull back troops, and immediately release all political prisoners, including those who won seats in the recent 2020 election.
Suspend all political and financial support to the military regime and peace process, including the Joint Peace Fund.
Impose immediate targeted sanctions on military owned and controlled companies as recommended by the UN Fact-Finding Mission on Myanmar.
Support international justice proceedings at the ICJ and the ICC to hold top military leaders accountable for genocide, war crimes and crimes against humanity.
Provide immediate direct cross-border assistance to adequately address humanitarian needs of all IDPs and refugees suffering from ongoing Burma Army militarization and offensives.
Naw Wahku Shee : + 66 861182261 ( Karen, English)
Saw Thoo Moei : + 66 988395898 ( English, Burmese)
ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအထောက်အကူပြုကွန်ယက်မှ စစ်တပ်အာဏာ သိမ်းမှုအပေါ် ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချလိုက်ပြီး ဗမာပြည် ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် နည်းလမ်းသစ်များရှာဖွေရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ဖေဖဝါရီလ ၁ ရက် တင်္နလာနေ့က ဖြစ်ပွားခဲသော စစ်တပ်မှ အာဏသိမ်းမှုအပေါ် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး အထောက်အကူပြုကွန်ယက် မှ ရှုတ်ချလိုက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အခြေခံအားဖြင့် ပျက်စီသွားပြီဖြစ်ကြောင်း စစ်တပ်၏ အာဏာသိမ်းမှုက နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအား အသိပေးလိုက်ပြီးသည်။ နိုင်ငံတကာမူဝါဒသည် စစ်တပ်မှ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိပဲ ဖန်တီးထားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးကို အခြေခံထားသည်။ စစ်တပ်မှ ပုံဖော်ထားသော ဗဟိုချုပ်ကိုင် အုပ်ချုပ်ရေးတည်ဆောက်ပုံမှာ မည်သောအခါမျှ ဗမာပြည်အတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖြစ်မလာနိုင်ပါ။
စစ်တပ်မှ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲအတည်ပြု နိုင်ငံအတွင်း ပြဌာန်းပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် စေ့စပ်ညှိနှှိုင်းမှုများကို စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်သည် တိုင်းပြည်အတွင်း နိုင်ငံရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကပ်ဆိုက်နေသော အခြေနေမှ အဖြေရရန် အထောက်အကူပြုမည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥဒေရေးဆွဲခြင်း အစရှိသော ဘက်ပေါင်းစုံမှ လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အနေအထားနှင့် ဆန့်ကျင်နေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံအသစ် ရေးဆွဲမည်ဆိုပါက အထက်တန်းလွှာအဝိုင်းအဝိုင်းကထိန်းချုပ်သည့် အထက်အောက် ဆုံးဖြတ်သည့်ပုံစံထက် လူထုနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးပြီး ရေးဆွဲသင့်သည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအောက်မှသွားနေသော ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်သည် မည်သို့မျှအောင်မြင်နိုင်မည်မဟုတ်သည်ကို လက်ရှိစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုက သက်သေပြလိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ အရပ်သားအစိုးရ၏ ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ အတွက် ရည်မှန်းချက်ရှိသော ပါဝင်သင့် ပါဝင်ထိုက်သည့် အစုအဖွဲ့များအားလုံးပါဝင်ကာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ကို ရေးဆွဲရမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှ ဒီမိုကရေစီသို့ စတင်ခြေလှမ်းနေသည့်အချိန်နှင့် အရပ်သားတစ်ပိုင်း၊ စစ်တစ်ပိုင်းအုပ်ချုပ်သည့်စနစ် (ဟိုက်ဘရစ်စနစ်) သည် ပန်းတိုင်ကို ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် အစပျိုး ခြေလှမ်းသာဖြစ်ပြီး အဆိုပါကာလတွင် အဖိနှိပ်ခံပြည်သူလူထုအနေဖြင့် စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည့် စစ်တပ်၏အာဃာတ အောက်တွင် ပေးဆပ်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပေးဆပ်မှုနှင့် ဖော်ဆောင်နေသော ငြိမ်းချမ်းရေးတိုးတက်မှုမှာ နှောင့်နှေးခဲ့သည့်အတွက် လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုပုံစံမျိုး ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်သင့်တော့ပေ။
ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့မှ အောက်ပါ အချက်များကို တောင်းဆိုလိုက်သည်
အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ပြီး၂၀၀၈ ဖွဲ့ဆုံးပုံကျဆုံးကြောင်း လူသိရှိကြားထုတ်ဖော်ကာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့စည်းပုံအသစ် ရေးဆွဲရန် တောင်းဆိုရန်၊
စစ်တပ်ပိုင် ကုမ္ပဏီ ထုတ်ကုန်များအားလုံးကို သပိတ်မှောက်ရန်၊
နိုင်ငံအဝှမ်းထိုးစစ်များ ရပ်တန့်ရန်၊ တပ်များရုတ်သိမ်းရန် နှင့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသူများအပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွှတ်ပေးရန်
ငြိမ်းချမ်းရေး ရံပုံငွေထောက်ပံ့နေသော ငြိမ်းချမ်းရေး ပူးပေါင်းရံပုံငွေအဖွဲ့ JPF အပါအဝင်နှင့် စစ်အာဏာရှင်များအပါ် နိုင်ငံရေး နှင့် ငွေးကြေးဆိုင်ရာ ထောက်အကူပြုနေမှုများအား ဆိုင်းငံ့ထားရန်
UN အချက်အလက်ရှာဖွေရေး ကော်မရှင်မှ မြန်မာနိုင်ငံပေါ် ထုတ်ပြန်ထားသော စစ်တပ် ပိုင် နှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော ကုမ္ပဏီများအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုများ ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ရန်
စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များမှ လူသားမျိုးနွယ်တုန်းသတ်ဖြတ်မှုအပေါ် တာဝန်ခံရန်
စစ်ရာဇဝတ်မှု နှင့် လူသားဖြစ်တည်မှုအပေါ်ဆန့်ကျင်သည် ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်မှုများအပေါ် အပြစ်ပေး အရေးယူမှုများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော နိုင်ငံတာကာ တရားမျှတမှုဆိုင်ရာတရားရုံး (ICJ) နှင့် နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ တရားခုံရုံး (ICC) တို့အပေါ်တွင် ထောက်ခံဝန်းရံရန်။
စစ်တပ်၏ ထိုးစစ်ဆင်မှု နှင့် စစ်အင်အား ဆက်တိုက် တိုးချဲ့မှုများအတွင်း ခံစားခဲ့ရသော ဒုက္ခသည် နှင့် ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများအတွက် လူသားခြင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့များ လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်ရန် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ထောက်ပံ့မှုများ ချက်ချင်းပေးအပ်ရန်။
နော်ဝါးခူရှီး +၆၆ ၈၆၁၁၈၂၂၆၁ (ကရင် အင်္ဂလိပ်)
စောသူးမွဲ +၆၆ ၉၈၈၃၉၅၈၉၈ ( အင်္ဂလိပ် ဗမာ)
မြန်မာဘာသာဖြင့် PDF Download ရန်။